စကျတငျဘာ 7, 2018 – Healthy Life Journal
ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (တာဝန်ခံဆရာဝန်၊ ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း) မေး. ကလေးတွေမှာကျောက်ကပ်ရောင်ရင် ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေ တွေ့ရတတ်ပါသလဲဆရာ။ ဖြေ. ကလေးတွေမှာ ကျောက်ကပ်ရောင်ရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပြသတဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ မတူတတ်ပါဘူး။ တချို့ကလေးတွေကျတော့လည်း မျက်နှာတွေဖောရောင်လာတယ်၊ ခြေမျက်စိဖောရောင်တတ်တယ်။ မိုးလင်းတာနဲ့ ကြည့်လိုက်ရင် မျက်နှာတွေဖောင်းနေတယ်၊ မျက်လုံးတွေအစ်နေတယ်၊ ခြေထောက်တွေရောင်နေတယ်။ တချို့ကျတော့လည်း...
ဘားတန်းခိုရင်း ပြုတ်ကျတာ မြီးညောင့်ရိုး အောင့်သွားလို့ . . .
မေး။ ။ဘားတန်းခိုရင်းပြုတ်ကျတာ မြီးညောင့်ရိုးအောင့်သွားတယ်။ အဲဒါ ဘယ်လိုဆေးမျိုးသောက်သင့်လဲရှင့်။ Aye Thida Tun(FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် ဖြေကြားသည်။ ဖြေ။ ။ မြီးညောင့်ရိုး (coccyx) ထိခိုက်မိသွားတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အရမ်းဆိုးရွားတာမျိုး မဟုတ်ရင် ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်။ ဆေးပူတွေ မလိမ်းပါနဲ့။...
အိပ်ရေးပျက်ခြင်းကြောင့် ဦးနှောက်က သူ့ဘာသာပြန်စားသည့်ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပေါ်ဟုဆို
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ အိပ်ရေးပျက်တဲ့အခါ ဦးနှောက်က သူ့ဘာသာပြန်စားတဲ့ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်တယ်လို့ လေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုကဆိုပါတယ်။ ဦးနှောက်ထဲမှာ ဖုန်စုပ်စက်လို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးတဲ့ Astrocytes အမည်ရ ဆဲလ်တွေဟာ အိပ်ရေးပျက်တာကြောင့် ပိုမိုတက်ကြွလှုပ်ရှားလာပြီး synpases ခေါ် နာဗ့်ကြောဆက်နေရာတွေရဲ့ အားလျော့ယိုယွင်းလာတဲ့အပိုင်းမှ ဆဲလ်တွေကို ရှင်းလင်းစားသုံးပစ်လေ့ရှိတယ်လို့...
သွားများကို ထိခိုက်စေသော အလေ့အထ ခုနစ်သွယ်
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) သင့်သွားတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့ အပြုအမူတွေ ကို နေ့စဉ်သင်လုပ်မိနေပြီလား။ အဲဒီလို အလေ့အ ထတွေကို မသိလိုက်မသိဘာသာ လုပ်မိနေတယ် ဆိုရင် ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ – ခပ်ကြမ်းကြမ်း သွားတိုက်ခြင်း သွားတွေကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းတိုက်တာကြောင့် သွားကြွေလွှာတွေကိုပါးသွားစေပြီး သွားကျဉ်လွယ်သလို...
ဆရာဝန်စမ်းတဲ့အခါမျက်လုံးကြည့်တာဘာကြောင့်လဲ. . .
မေး ။ဖျားနာတဲ့သူကို ဘာကြောင့် မျက်လုံးကြည့်ကြတာလဲ။ သိချင်လို့ပြောပြပေးပါ။ Thuzar Aung (Fb) ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း၊ တာဝန်ခံ) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည် ။ ဖြေ ။ ဖျားတာရယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ လူနာတွေကို စမ်းတဲ့အခါ မျက်စိကြည့်တာက သွေးအားနည်းရောဂါ...
ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျလိုသူတို့အတွက် ဆာလောင်မှုကို ထိန်းချုပ်ပေးသည့်အစာများ
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ရုံးပတီသီး ရုံးပတီသီးမှာ ဗီတာမင်အေ၊ ဗီတာမင် B6 နဲ့ ဗီတာမင်စီ၊ ဖောလိတ်၊ ကယ်လ်စီယမ်၊ သံဓာတ်နဲ့ မဂ္ဂနီဆီယမ်တို့များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်အစာထဲ ရုံးပတီသီးထည့်စားတဲ့အခါ နာရီပေါင်းများစွာ ဗိုက်မဆာဘဲနေနိုင်မှာပါ။ ဂျုံမှုန့်အကြမ်း ဂျုံမှုန့်အကြမ်းမှာ ပျော်ဝင်တဲ့...
နှလုံးကျန်းမာ၊ စိတ်ချမ်းသာစေမည့် နည်းများ
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ နှလုံးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချနိုင်ဖို့ရာအတွက် အောက်ပါနည်းလမ်းတွေကို လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ – အိပ်ရေး၀၀ အိပ်စက်ပါ။ – လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ပါ။ တစ်နေ့မိနစ် ၃၀ ခန့်လမ်းလျှောက်တာကြောင့် စိတ်ခံစားမှုကောင်းပြီး စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျော့ကျစေပါတယ်။ သွေးလှည့်ပတ်မှု ကောင်းတဲ့အတွက် နှလုံးကျန်းမာစေပါတယ်။ –...